Tylenol yevana vs. Motrin yevana: Ndeipi iri nani pakurwadziwa kana kupisa muviri? - Zvinodhaka Info | Chikunguru 2021
Info Info, Hutano Dzidzo Hutano Dzidzo, Nhau Dhinda Nharaunda, Kambani Nharaunda Kambani Info Info, Nhau Nhau, Wellness Zvinodhaka Info Kambani, Iyo Checkout Nharaunda, Wellness Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Kambani, Nhau Dzidzo Yehutano Wellness
Kuru >> Zvinodhaka Info >> Ndeupi unonyanya kudzikamisa marwadzo kana kupisa fever kwevana?
Ndeupi unonyanya kudzikamisa marwadzo kana kupisa fever kwevana?
Kana vana vako vachirwara, chinhu chete chiri mupfungwa dzako kuvabatsira kuti vanzwe zvirinani- nekukurumidza sezvazvinogona. Zvakaoma kutarisa vadiki vachitambura nefivha kana kurwadziwa. Haasi ese akakwira-kupfuura-akajairwa tembiricha kana aches nemarwadzo zvinoda kurapwa. Asi, kana mwana wako akazviita, zvakakosha kurapa aya mamiriro zvakachengeteka.
Kurwara kunowanzoitika pakati pehusiku, uye mwana akaneta anowanzoreva mubereki aneta. Pamusoro peizvozvo, pane zvakawanda zvekusarudza kusarudza kubva. Kana iwe ukazviwana uchinzwa kunetseka mukati mevana marwadzo ekudzivirira nzira, kana iyo vana fivhiri inodzora chikamu chefesi, shandisa gwaro iri kusarudza yakanakisa kupfuura-the-counter mishonga.
Mwana wako anoda mushonga here?
Nepo vanhu vazhinji vachitenda chero tembiricha yakakwira kupfuura 98.5 Fahrenheit inoda meds, chokwadi ndechekuti: Haasi ese fivha zvinoda kurapwa. Ini ndinogara ndichifarira mhuri dzangu kuziva kuti kune zvakawanda zvisirizvo zvisizvo kunze uko zvine chekuita nefivhiri muvana, anodaroCorey Hove, MD, FAAP, chiremba wevana uye iyoco-muvambi uye mukuru wezvekurapa pa Kuchengeta Kwakashinga .Fivha chiratidzo chechirwere zvakanyanya sekukosora kana kumhanyisa mhino. Iko kukoshesa kufunga hakusi chiratidzo, ndicho chikonzero chechiratidzo.
Nhungamiro yekare yakataura kuti fivhiri yakakwira kupfuura 104 madigiri Fahrenheit yakafanirwa nerwendo kuenda kuchimbichimbi kamuri, uye kuti fevha dzese dzinofanira kudzikiswa. Zvino, vana chiremba vazhinji vanokurudzira kurapa fever chete kana kuri kuita kuti mwana wako agadzikane. Zvichireva, kurapa hakuzorape mwana wako nekukurumidza, zvinogona kungobatsira kuti kurwara kuve nyore. Mubereki haana kumbofanira kupa mushonga wekudzora fivha pasi, Dr Fish vanodaro. Ini ndinowanzo kurudzira kurega fivhiri ichimhanya, ramba uine mvura zhinji, uye upe acetaminophen kana ibuprofen zvichibva pamanzwiro ari kuita mwana, kwete iyo nhamba iri pane thermometer.
mangani mg emelatonin aunofanira kutora
Izvo zvinoenda pakurwadziwa. Kana iri ibvi rakabviswa, kana kumhanya-kwe-iyo-chigayo pahuro, haufanire kugara uchisvika ibuprofen yevana. Bhandeji, kana kurapwa kwepanyama sepopsicle, kunogona kubatsira kuti ache iende. Kune akanyanya kuomarara, mamiriro ekuzvimba-kunge zino rinorwadza, tonsillitis, kana kurwadziwa nzeve-mushonga wepamusoro-wechawani unogona kunge uri sarudzo yakanaka.
Ndezvipi zviri nani: Tylenol yevana kana Motrin yeVana?
Kune maviri akakosha marudzi emishonga yekurapa marwadzo uye kudzikisa fivha yevana: Tylenol yevana (inozivikanwawo seacetaminophen) uye Motrin yevana kana Yevana Advil (inozivikanwawo seibuprofen).Uku ndiko kufunga kukuru pakusarudza kwekushandisa.
Kuchengetedza uye kugona
Tylenol (acetaminophen) naAdvil (ibuprofen) vakachengeteka kuvana vazhinji, mushure mekutarisa nemubatsiri wezvehutano kuti vaone kuti havana chirwere chinopesana chimwe kana chimwe, anodaro Leann Poston, MD, chiremba wevana uye mupiro we Ikon Hutano .
Semuenzaniso, vamwe vana vari allergiki kune asiri-steroidal anti-anogumbura zvinodhaka (NSAIDs) senge ibuprofen, asi kwete acetaminophen. Kana, chirwere chechiropa chinogona kuita kuti acetaminophen ive nenjodzi kune vamwe vana. Kana uchisarudza pakati peTylenol [acetaminophen] naAdvil [ibuprofen], funga kuti Ibuprofen inogona kuomarara padumbu, nemwoyo, uye itsvo, asi inoderedza kuzvimba, uye Tylenol haadaro, Dr. Poston anotsanangura.
Ivo vaviri zvinogamuchirwa kurapwa , maererano neAmerican Academy yeVana chiremba (AAP). Kunyangwe, zvakakosha kuti uzive kuti mamwe maNSAID haana kukurudzirwa, kana kuchengetedzeka, kune vana. Aleve (naproxen) haishandiswe fivha muvacheche kana vana vari pasi pemakore gumi nemaviri. Kunyange vanhu vakuru vakawanda vachisvika kuBayer, Dr. Fish vanoti, Aspirin yerudzi rupi zvarwo haifanire kupihwa vana nekuda kwekunetseka kweasingawanzo asi akakomba mhedzisiro Reye chirwere.
RELATED: Tylenol vs. NSAIDs
Mishonga iyi yose inoshanda pakurapa marwadzo nefivha, anodaro Dr. Fish. Izvo chaizvo zvinoenderana nesarudzo yako, uye chii chinoshanda zvakanyanya kumwana wako.
mishonga yemusha yeiyo mbiriso chirwere yogati
Vamwe zvidzidzo ratidza kuti acetaminophen zvirinani pakurapa fivha ine zviratidzo zvakaita sefuru. Asi, ibuprofen inoderedza kuzvimba, uye inogara kwenguva yakareba kupfuura acetaminophen, sekureva kwe Chipatara cheSpecial Surgery . Mune mamwe mazwi, rega zviratidzo uye mhinduro yemwana wako pakurapwa munguva yakapfuura ive yako gwara.
Ibuprofenhaifanire kushandiswa muvacheche vari pasi pemwedzi mitanhatu ekuberekwa, anodaro Dr.Fish. Acetaminophen yakachengeteka kune vacheche nevana veese mazera, maererano neAAP; zvisinei, usashandise acetaminophen pasi pemasvondo gumi nemaviri ekuberekwa kunze kwekunge waudzwa nachiremba wevana nekuti kupisa mukati memasvondo gumi nemaviri ehupenyu kunofanirwa kunyorwa munzvimbo yekurapa.
Kune vana vari pasi pemwedzi mitatu (kana mazuva makumi mapfumbamwe), iwe unofanirwa kugara uchishevedza chiremba wevana nekukurumidza kune fivhiri inopfuura kana yakaenzana ne100.4, anotsanangura Dr. Fish.
Chipimo chemushonga uye mhando
Kana uchirapa fivhiri yemwana kana kurwadziwa,Nguva dzose tora yakaderera inoshanda dosi, Dr. Poston anodaro. Dose zvichienderana nehuremu, uye usapfuure yakanyanya dhosi pazuva.
RELATED: Dzidza maitiro ekuyera mishonga yemwana wako nemazvo
Kana mwana wako asingakwanise kumedza mapiritsi, kana kunetsekana nekuchengetedza chikafu pasi, pane zvinwiwa, zvinotsengwa, uye mafomu ekuwedzera anowanikwa Yakanakisa sarudzo yemwana anorutsa ingangoita acetaminophen nekuti inogona kupihwa rectally kana zvichidikanwa uye ine zvishoma mukana wekugumburisa dumbu kana ichienzaniswa nebuprofen, Dr Fish anodaro.
Kana iwe ukashandisa fomu remvura, ingova nechokwadi chekushandisa iyo yakavharirwa mukombe wekuyera kana sirinji. Zvirinyore kupa dhiyo isiriyo uchishandisa kiyipuni yekicheni. Mishonga mishoma kwazvo haishande, uye yakawandisa inogona kuva nenjodzi. Iko kune yakatarwa dosing purogiramu uye yakanyanya dhosi pazuva kudzivisa mhedzisiro inogona kuve yakakomba, anotsanangura Martha Rivera, MD, chiremba wevana kuAdventist Health White Memorial muBoyle Heights, California. Acetaminophen inogadziriswa muchiropa. NSAIDS [ibuprofen] inogadziriswa itsvo. Kunyanya kukwirira kwedhosi kunogona kukonzera chiropa kana itsvo kukuvara
IAmerican Academy yePediatrics inopa dosing machati uye kutungamira kweacetaminophen pano uye ibuprofen pano .
inguva yakareba sei kuronga b inoshanda mune yako system
RELATED: Yakawanda sei ibuprofen yakachengeteka kutora?
Kusiyanisa Tylenol neMotrin
Tylenol naAdvil vanogona kuchinjaniswa kubatsira kuburutsa fivha yakasindimara kana kurwadziwa, zvisinei, njodzi yekuwedzeredza yakanyanyisa, anodaro Dr. Poston. Unogona kupa Ibuprofen maawa matanhatu ega ega, uye acetaminophen maawa mana. Kusiyanisa pakati pezviviri izvi kunogona kudzikisa iyo nguva yenguva pakati pemadosi kana mwana wako asina kurapwa. Semuenzaniso, unogona kupa mwana acetaminophen na9 mangwanani, ibuprofen na12 masikati, acetaminophen zvakare na3 masikati, uye ibuprofen zvakare na6 dzemasikati.
Zvinogona kuva zvakaoma zvakakwana kuti urangarire pawakapedzisira kupa mwana wako mushonga mumwe chete pakati pehusiku. Kuwedzera wechipiri mushonga kunoomesesa mamiriro acho. Sarudza imwe kana imwe pakutanga, Dr. Poston anodaro. Kana iwe ukaita dose nezvose, nyora pasi yako dosing purogiramu yekudzora mukana weiyo ovhadhozi . Dosing nezvose zvinokutendera kuti upe mushonga maawa matatu ega ega panzvimbo mana paTylenol [acetaminophen] uye matanhatu eibuprofen.
Chero ipi mishonga yaunosarudza, ese marapirwo anoitirwa kurerutsa kwenguva pfupi zviratidzo. Kana kurwadziwa kwemwana kana kupisa muviri kuchiramba kwemaawa anodarika makumi maviri nemana kana mwana wako achiratidza zvimwe zviratidzo zvekutambudzika, usazeze kusvika kuna chiremba wevana vako kuti akubatsire.
Pazasi mutsara vabereki vanoziva vana vavo, Dr. Rivera anodaro. Kana paine kunetsekana kuti pane chiratidzo chekuti [mwana] haana kumira zvakanaka ndapota batai [mupi wako] mupi wezvehutano kuti akutungamirei, kurairwa, uye dosing yakakodzera.Semazuva ese, zvakakosha kuchengeta mishonga pasingasvike vana. Chengeta machipisi asingachengeti mwana pamabhodhoro, uye verenga zvinyorwa zvemusanganiswa zvigadzirwa (senge allergy, chikosoro, kana kutonhora mafomu) kudzivirira kuwandisa zvinodhaka. Kana mwana wako netsaona achitora mishonga kana iwe ukanyanyisa mwana wako, fona Kudzora Uturu pakarepo pa1-800-222-1222 usati waita chero chinhu kunze kwekunge 911 emergency emergency ichidikanwa.
Toujeo vs Lantus: Main Misiyano uye Kufanana
Omeprazole mhedzisiro uye maitiro ekuzvidzivirira
inguva yakadii mushonga wakanakira mushure mekupera kwezuva
ndeupi musiyano uripo pakati pepravastatin uye atorvastatin
singulair inotora nguva yakareba sei kuti ishande
yakawanda sei vitamini d3 yandinofanira kutora
ndeapi mapiritsi akasiyana ekudzivirira kubereka
mutsauko pakati pe beta blocker uye ace inhibitor
Kambani, Info Info
Hutano Dzidzo, Zvipfuwo